National Technical University rweUkraine - Study muUkraine
National Technical University rweUkraine “Kyiv Polytechnic Institute”
National Technical University rweUkraine “Kyiv Polytechnic Institute” Details
Musakanganwa kuti discuss National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Kyiv Polytechnic sangano (kubva 1998 - National hwokugadzira University rweUkraine "Kyiv Polytechnic akatanga" - NTUU "KPI") rakaumbwa 1898. Nokufamba kwarwo yava yakadzidziswa 370 zviuru pava-, 60 zviuru iyo panguva kwenguva Ukrainian rusununguko.
KPI pamisara 4% yakanaka mumayunivhesiti zvenyika maererano dzakawanda Rating QS uye Webometrics.
It gore negore akabata soro nzvimbo pakati yakanakisisa establishments yakakwirira dzidzo Ukraine - "Compass" uye "TOP-200 Ukraine".
Maererano Google Corporation, ndiro yepamusorosoro rokudzidzisa pakagadzwa akakurumbira zvikuru rweUkraine mumakore okupedzisira makore.
NTUU "KPI" ndechimwe chezvisarudzo establishments dzidzo muEurope. It anodzidzisa 25 zviuru vadzidzi, postgraduates; doctorates uyewo mudzidzi vatorwa dzakavakidzana uye kure kunze nyika. mudzidzi ose wechitanhatu Kyiv guta riri kuwana dzidzo munyika KPI uye muzvinafundo uye wokushamwaridzana ose yechi25 purofesa muUkraine ari pamwe murimi KPI, pakati establishments zvose hwokugadzira dzakakwirira dzidzo nyika yedu, ose fakaroti rechishanu uye chairs simba rorusununguko chair KPI.
University ane 19 zvichitaurwawo, 9 inodzidzisa uye kwesayenzi Kudya, wandei nesayenzi uye kutsvakurudza zvikoro uye nzvimbo dzidzo. It inodzidzisa bachelors, Nyanzvi uye Masters, Miteva uye Doctors Sayenzi. Yunivhesiti ine rokubudisa imba yayo "Polytechnika". It anoshandisa kupfuura 500 mapurofesa uye pamusoro 1300 sanyina mapurofesa.
makamuri All uye mumarabhoritari vari vakapakata zvivako ano; itsva kombiyuta samambure michina dzidzo vari chinozoiswa kuti inoita kupa dzidzo anokwanisa kuti zvinodiwa yakanakisisa vatorwa mumayunivhesiti.
Institute chivakwa uye NTUU "KPI" mano uyewo yunivhesiti hostels vanopararira pamusoro kunharaunda 160 hectare. Iri ndiro guta chaiyo mukati meguta. The yunivhesiti ine yayo Center retsika uye nounyanzvi, ano mutambo dzakaoma, policlinics, mana mitambo uye nhandaro nezvigadziko pedyo Dniper rwizi, pana Sea Black uye Carpathians. raibhurari Its kwesayenzi uye hwokugadzira ndeimwe chakanakisisa munyika.
NTUU "KPI" riri sangano mukuru National mashoko samambure pakagadzwa yepamusoro dzidzo uye Institutes of National Academy of Sciences - URAN kuti revatema pamwe European yedzidzo samambure - GEANT. The yunivhesiti kwazova initiator kwe "Muzinda supercomputer Masvomhu uye mashoko" muUkraine.
New kuitika pamusoro NTUU "KPI" vari with State mubayiro rweUkraine mumunda zvesainzi. Scientific paka "Kyiv Polytechnic" anotamba basa rinokosha mune commercialization kwesayenzi zvabuda uye michina zviitiko zviri kuyunivhesiti.
NTUU "KPI" pamwe michina mumayunivhesiti hwevanhukadzi vakawanda munyika yose, yakawanda masangano dzakawanda (UNESСO, UMAMBO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA nezvimwewo) uye makambani zvikuru kutungamirira uye yemakambani (Motorola, Alcatel, FESTO, Samsung, INTEL nezvimwewo), unotora pane dzakawanda yedzidzo, mabasa kwesayenzi uye zvirongwa.
Vaya vanofarira nhoroondo zvesainzi vari familiarized pamwe State Polytechnic miziyamu pamusoro NTUU "KPI" ari mumwe mukuru Ukrainian mamiziyamu yezvigadzirwa zvemazuva ano uye midziyo uye mukuru payunivhesiti miziyamu rweUkraine.
Nekurangarira mukurumbira vamutangira pane shongwe yeMharidzo kudzidza, Masayendisiti ane upenyu vakanga chokuita KPI pamusoro kembasi.
Institute of Physics uye Technology
Rorusununguko Radio Engineering
Rorusununguko Physics uye Mathematics
Rorusununguko Chemical Technology
The institute rakaumbwa 1898. At that time it had four departments: Mechanical, mushonga, zvekurima, uye Civil Engineering. The first enrolment constituted 360 vadzidzi. The leading Russian scientists Dmitri Mendeleev, Nikolai Zhukovsky and Kliment Arkadyevich Timiryazev gave substantial scientific and organizational assistance in the founding of the institute.
mu 1930, the Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA) was established on the basis of factory and communal construction branch of the Kyiv Polytechnic Institute (KPI) and the Architectural faculty of the Kyiv Art Institute.
Unoda discuss National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
National Technical University rweUkraine “Kyiv Polytechnic Institute” pamusoro Map
Photos: National Technical University rweUkraine “Kyiv Polytechnic Institute” pamutemo Facebook
National Technical University rweUkraine “Kyiv Polytechnic Institute” Wongororo